Kazakhstan: Politika sy fiaraha-monina ao anatin’ny fotoanan’ny Krizy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Febroary 2009 14:07 GMT
Nampiseho ny fahalalana raitra mahakasika ny PR sy ny fihainoana ny vianavinan’ny vahoaka indray kosa anefa ny Filoha – Nisaotra ny vahoaka izy noho ny fanomezana anarana azy saingy nanda ny handray ny mari-pankasitrahana izy. Eo ihany koa fa niala an-daharana ireo mety ho tombotsoa ny parilemantera. Notaterin’ireo birao vaovao fa mandanjalanja sy mamehy ny vola lany amin’ny taona 2009 ny volavolan-dalana tapaka entina miady ny krizy. Mitsikera I M-kaa [ru]:
Etsy andaniny, tsy mazava mihintsy ny fisehon’ny toe-karena Kazakhstaniana – Manda ny fisian’ny krizy ara-toe-karena eo amin’ny firenena ny governemanta, fa kosa ny rafitra miady amin’ny krizy dia efa napetraka. Mitandrina be ihany ny mpitondra fanjakana ny amin’ny fomba fihetsika sy fiteny – Mety midika ho teny mamoafady ny teny hoe “krizy”. Nalefan’I Cherry-eye ny bolongana misy ny bankin’ny Kazakh mitazona ny sarin-dokam-barotra ratsy endrika tao Moscow (BTA Bank izay miray antoka amina orinasa madinika ao amin’ny firenena CIS [faritany mizaka-tena repoblikana]). Mivaky toy izao ny soratra eny amin’ny tabilaobe an-dalana: “Ekenao fa ny krizy tsisy tahotra dia hanary ilay endriny fotsiny ihany – Tsisy ahiahy ny fametraham-bola”. Miteny ny mpitoraka bolongana [ru]:
Mizara ny fijeriny mikasika ny fiverenany ao Kazakhstan I Dorovskih, mponina Almaty teo aloha izay mipetraka ao Etazonia ankehitriny [ru]:
31 Oktobra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
26 Oktobra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
22 Oktobra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy